Wararka - Waa maxay mesh silig laba geesle ah
Mesh silig laba geesood ah waa mid ka mid ah mesh silig la god laba geesood ah. Noocan ah mesh silig laba geesood leh waxaa tolmo wanaagsan by silig bir ah, silig steel carbon hooseeyo ama ahama steel.The daaweynta dusha noqon kartaa koronto galvanized (sidoo kale loo yaqaan qabow galvanized), diirran kulul galvanized Haddii aad doorato galvanized kulul lagu rusheeyey, waxaa jira laba nooc ： mid waa kulul la geliyay galvanized ka hor intaan la tolo, kan kalena waa la dilaa kulul galvanized ka dib markii la tolo.
Ilaalinta PVC waxay si weyn kor ugu qaadi doontaa nolosha isticmaalka siligga siligga iyo xulashada midabka kala duwan waxaa lagu dhex dari karaa deegaanka dabiiciga ku xeeran.
Mesh silig laba geesle ah ayaa loo kala qaybin karaa mesh silig laba-geesle ah oo fudud iyo mesh culus oo laba-geesood leh.Light shabakad silig laba-geesood ah oo sidoo kale loo yaqaan qafiska digaagga, mesh silig culus oo laba-geesood ah oo sidoo kale loo yaqaan shabakadda qafis dhagax.
Sidaa darteed, mesh silig laba geesood leh oo galvanized ah iyadoo la adeegsanayo dhexroor silig ah 0.3mm ilaa 2.0mm; PCV shaashad caag ah oo laba geesood leh oo la isticmaalayo dhexroor silig ah 0.8mm to2.6mm oo silig biraha PCV ah. laga dhigo mid hal dhinac ah iyo laba geesood ah.
Waxaa badanaa loo isticmaalaa warshadaha, dhismaha iyo beeraha sidoo kale waxaa loo isticmaalaa sida xayndaabka, sida qafiska digaaga, ilaalinta xayawaanka.Haddii aad rabto inaad u isticmaasho mesh silig gees-gees ah sida qurxinta masiixigaaga, waa ikhtiyaar wanaagsan. shuruudahaaga.
1.Fudud in la isticmaalo
Awood awood leh oo looga hortago waxyeelada dabiiciga ah u adkaysiga daxalka iyo u adkaysiga waxyeelada cimilada.
3.Can iska caabinta noocyo badan oo cillad ah, laakiin weli ma burburin.
Aasaaska geeddi-socodka 4.Excellent wuxuu hubiyaa isku mid ahaanta dhumucda dahaadhka iyo adkeysiga daxalka.
5.Save on kharashka gaadiidka.Waxaa la xoqin karaa duub yar oo lagu duudduubay warqad-qoyaan-caddayn, qaado meel yar.
6.Mesh godka quruxsan iyo heerka .Mesh furitaanka laga beddeli karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
1. Darbiga dhismaha oo go'an, kuleylka kuleylka
Ilaalinta deegaanka, ilaalinta dhirta
4.Badbaadi oo taageer badda, buuraha, waddooyinka iyo buundooyinka.